अज्मिर मेट्रो घण्टा: अज्मिर मेट्रो धेरै वर्षदेखि शहर भित्र भूमिगत र माथिको र भूमिगत यातायात सञ्चालन गर्दै छ। इज्मिर, जसको फराकिलो रेलवे नेटवर्क छ, [अधिक ...]
त्यहाँ बुर्साको Gursu जिल्ला मा एक ट्रेन स्टेशन हुनेछ ?; जब ग्राउन्डब्रेकिंग समारोह 2012 मा आयोजित भएको थियो, एउटा2रेल स्टेशन बुर्सामा पहिल्यै देखाइएको थियो, एउटा बालाटमा र अर्को गार्सुमा। पछिल्लो [अधिक ...]
Bursa गर्न के ट्रेन; गत हप्ता, ... टर्की भव्य राष्ट्रिय सम्मेलनको बजेट योजना आयोगले यातायात मन्त्रालयको बजेटमा छलफल गरिरहेको थियो। राम्रो पार्टी Bursa का उपाध्यक्ष र उपाध्यक्ष प्रोफेसर थियो। डा ईमेल तातलोलोले2का उपमन्त्रीलाई खुलेआम सोधे: बर्सामा बनेको यापलान [अधिक ...]
जहाँसम्म हामी बुझ्छौं, इरानबुल वा आन्कारामा रेलमार्गको यातायातको आशालाई जोड्ने लिरी akनाक्कले र बालकेसिर राजनीतिज्ञहरू र बाल्केशिर र बालिकेसिरका मेयरहरूले अन्काराको भ्रमण गरेका थिए र बान्डर्मा लाई फेरि लगानीको एजेन्डामा लगियो। ... यहाँ पनि, सेन्ट्रल अनातोलिया क्षेत्रमा औद्योगिक उत्पादनको लक्ष्य रेलमार्गले पोर्ट पुग्नको लागि महसुस गरिएको छ, तर बुर्साको लागि [अधिक ...]
Bursa उच्च गति रेल परियोजना बाह्य withणको साथ बाहिर गरिनेछ; तस्विरलाई अहिले चिनिन्छ भृसा - येनिसिर-उस्मानेली रेलमार्गमा दुई चरणहरू छन्। Bursa-Yenişehir लाइनको पहिलो चरणको पूर्वाधार कार्यहरूले 70 प्रतिशतमा पुग्यो। कामका केही बुँदाहरू देख्न सकिन्छ, तर गम्भीर प्रगति [अधिक ...]
TVVAAŞ जनरल डाइरेक्टरेट भित्र व्यावसायिक प्रशिक्षण इन्टर्नशीप गर्ने उम्मेदवारहरूको 2020 वसन्त सूची घोषणा गरिएको छ।
बोर्डका टीसीडीडी अध्यक्ष र महाप्रबन्धक अली अहसान उइगुन, सहायक महाप्रबन्धक र त्यसका साथ आएका प्रतिनिधिमण्डलले अंकारा सिवास हाई स्पीड ट्रेन लाइनमा अवलोकन गरे। अहसान Uygun, प्रगति प्रक्रियाको बारेमा कम्पनी [अधिक ...]
1973 वर्ष र निर्माण सामाग्री देखि अनलाइन भएको छ जो टर्की, सूची को पहिलो र मात्र नयाँ सामाग्री सूची निर्माण क्यारियर ट्याब मा एक धेरै महत्त्वपूर्ण खाली भरिन्छ, अब प्रत्यक्ष! बिल्डिंग क्याटालो, चौडा [अधिक ...]
आंकड़ा बाटकेन्ट मेट्रो नक्शा रुट र टिकट मूल्य - M1 BATIKENT METROS - अंकाराको पहिलो मेट्रोको निर्माण मार्च 29 मा शुरू भयो। मेट्रो लाइन 1993 Kentzılay Batıkent को मार्गमा अवस्थित छ [अधिक ...]
अंकारा केइरेन सबवे नक्शा मार्ग र टिकट मूल्य M4 KEÇİÖREN METROSU - Kızılay Gazino मार्गमा मेट्रो लाइनको निर्माण 15 जुलाई 2003 मा शुरू भयो। जब अंकारा महानगरपालिका पूरा गर्न सकेन, [अधिक ...]
आजको इतिहास 8 डिसेम्बर 1874 Agop Azarian कम्पनीले बेलुका-सोफिया लाइन निर्माणको लागि सिएटरको रूपमा 12 महिना पूरा गर्न प्रतिबद्ध छ।